Macallin Manuel Pellegrini oo ka hadlay xaaladda dhaawac ee Yaya Toure, miyuu diyaar u yahay kulanka caawa PSG ee Champions League? – Gool FM
(Manchester) 06 Abriil 2016 – Macallinka kooxda Manchester City ee Manuel Pellegrini ayaa shaaca ka qaaday kulanka caawa ay la ciyaarayaan PSG ee Champions League in uusan heli doonin adeegga laacibkiisa qadka dhexe ee Yaya Toure.
Waxa uu xusay Manuel Pellegrini in kulanka lugta hore ee siddeed dhammaadka Champions League laga yaabo inuu diyaar ahaado goolhaye Joe Hart, laakiin waxa uu meesha ka saaray inuu kulankaas ciyaari karo Yaya Toure.
“Waxa uu ka sheeganayaa Toure xanuun jilibka ah, mana ciyaarayo kulanka PSG, Joe Hart wax xanuun ah ma dareemayo haatan, waana lagu sameeyey tijaabooyin caafimaad iyo mid jir ahaaneed mana jiraan waxa uu sheeganayo.” ayuu Manuel Pellegrini u sheegay Sky Sports.
Waxa uu aaminsan yahay macallin Manuel Pellegrini in labada kooxood ee Man City iyo PSG ay caawa u siman yihiin inay u gudbaan nus dhammaadka Champion League, inkastoo uu xusay inaysan doonayn inay barbaro ku galaan caawa Paris.